အမ်ဘာပေးဟာ နေမာရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မရောက်သေးပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဒန်နီအဲလ်ဗက်စ် | Football Myanmar
အမ်ဘာပေးဟာ နေမာရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မရောက်သေးပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဒန်နီအဲလ်ဗက်စ်
November 27, 2018 Adam Willian	80 Comments
အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ် အမ်ဘာပေးကို ကမ္ဘာ့အဆင့်ရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပေမယ့်လည်း ၄င်းရဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဖော် ဒန်နီအဲဗက်စ်ကတော့ အမ်ဘာပေးအနေနဲ့ တိုးတက်လာဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒန်နီအဲလ်ဗက်စ်ဟာ အမ်ဘာပေးအနေနဲ့ သူ့ရဲ့တိုက်စစ်အသင်းဖော် နေမာရဲ့အဆင့်အတန်းမျိုးရောက်ရှိအောင် အများကြီးအလုပ်ကြိုးစားရဦးမယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အမ်ဘာပေးဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲမှာပီအက်စ်ဂျီအသင်းနဲ့အတူ ပြည်တွင်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံအသင်းနဲ့လည်း ကမ္ဘာ့ဖလားဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့အပြင် လက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာလည်း အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပြသလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘရာဇီးသား အဲလ်ဗက်စ်ကတော့အမ်ဘာပေးအနေနဲ့ ဒီထက်ပိုမိုတိုးတက်လာဖို့ လုပ်ဆောင်သွားရဦးမယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
Goal သတင်းဌာနကိုပြောကြားရာမှာတော့ အဲလ်ဗက်စ်က “နေမာနဲ့ အမ်ဘာပေးတို့ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ မတူညီတဲ့အဆင့်အတန်းတွေမှာရှိနေကြတာပါ၊ အမ်ဘာပေးဟာ ဘောလုံးလောကမှာ သမိုင်းတွင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လာမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ နေမာဟာ အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ အမ်ဘာပေးကတော့ နေမာ့လို အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ရောက်ဖို့အတွက် လမ်းခုလတ်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမ်ဘာပေးဟာ ထူးချွန်ပါတယ်၊ သူ့အနေနဲ့ နေမာဆီက သင်ယူလို့ရတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖြုန်းတီးမယ်လို့ မထင်ပါဘူး၊ ဒီလိုပြောတာကလည်း နေမာဟာ လီယွန်နယ်(မက်ဆီ)
ဆီကနေ အများကြီးသင်ယူခဲ့လို့ပါတယ်” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အဲလ်ဗက်စ်က အမ်ဘာပေးကို သူတတ်နိုင်သလောက်ကူညီသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။’”ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ကူညီပေးဖို့ အသင့်ရှိချင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အမ်ဘာပေးအတွက် အမြဲတမ်းပဲ ရှိနေမှာပါ၊ သူ့အနေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ မကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သူ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သူမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်၊ သူ့ကို ကျွန်တော်ကူညီနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်အောင်ပေါ့၊ ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ခက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်လာအောင်တော့ လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Previous Postအဲဗာတန် အသင်း နဲ့ အပြောင်းအရွေ့ အပေါ် ဘယ်လို တုန့်ပြန် ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ လီဗာပူးစတား ရှကီရီNext Postယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ အတွက် သတင်းကောင်း တစ်ခု ပြောကြား သွားတဲ့ #မော်ရင်ဟို
80 thoughts on “အမ်ဘာပေးဟာ နေမာရဲ့ အဆင့်အတန်းကို မရောက်သေးပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဒန်နီအဲလ်ဗက်စ်”
Hey What we be durable here is , an importantoffers
ff97 cialiseinsufficienza renale
[url=http://cialishhqq.com/]36 hour cialis dosage[/url]
✅ FREE DATING APPS ♀ http://sexinyourcity.ml ❤
Heya great website! Does runningablog like this requirealarge amount of work? I’ve very little understanding of programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just wanted to ask. Appreciate it!